အမျိုးသားများအတွက်များအတွက်အကောင်းဆုံး 24 တစ်ဝက်အင်္ကျီလက် Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
အမျိုးသားများအတွက်များအတွက်အကောင်းဆုံး 24 တစ်ဝက်အင်္ကျီလက် Tattoos ဒီဇိုင်း Idea
sonitattoo နိုဝင်ဘာလ 21, 2016
သငျသညျယောက်ျားတစ်ယောက်မှန်လျှင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။ ဝက်လက်တက်တူးထိုးသငျသညျအစဉျအမွဲတွေ့နိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးတက်တူးတဦး။ သငျသညျကျိန်းသေအကြောင်းအရာရဲ့အဆုံးမှာအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသဘောတူပါလိမ့်မယ်။
1 ။ ဝက်လက်တက်တူး
2 ။ ချစ်စရာ ဝက်လက်တက်တူး
သင်ဤကဲ့သို့သော #sleeve တက်တူးထိုး #half ဖို့တောငျးဆိုမီယူရန်လိုအပ်ပါတယ်အချို့မရှိမဖြစ်အပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတစ်ဦး tattooist များ၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်နှင့်ဒုတိယသငျသညျအပျေါတက်တူးထိုး၏နေရာချထားသည်။
3 ။ အံ့သြဖွယ်ဝက်လက်တက်တူး
သင်သည်အဘယ်သို့နားလည်ကြဘူးသင်သည်သင်၏ဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ကြသည်သည့်အခါအံ့သြဖွယ်စွပ်အိတ် #tattoo သာဆည်းပူးနိုင်ပါတယ်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
4 ။ ငှက်ဝက်လက်တက်တူး
သင်သည်သင်၏ပခုံးဝက်လက်တက်တူးကိုဘယ်လိုသွားရမလဲစိုးရိမ်သောဖြစ်ရပ်၌, သင်ပထမဦးဆုံးသင်သည်လက်ျာရွေးချယ်မှုအောင်ကူညီနိုင်သူသည်သင်၏ tattooist နှင့်အတူတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
5 ။ Cool တစ်ဝက်စွပ်အိတ်တက်တူး
6 ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဝက်လက်တက်တူး
သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဝက်လက်တက်တူးထိုးရှေးခယျြတဲ့အခါ, လူတွေအများကြီးသင်ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုလာပုံကိုအံ့ဩမည်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောတစ်ဦးက #design အရှိဆုံးလူတို့သညျအဘို့အသွားနေကြတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်လာသည်။
7 ။ တောက်ပသော ဝက်လက်တက်တူး
& Odds သင်ရောင်စုံဝက်လက်တက်တူးထိုးရှိခြင်းကြသောအခါမှတဆင့်ထိုင်ဖို့ဘယ်လိုထွက်နေသေးတယ်ရှိမရှိဖြစ်ကြသည်။ အဆုံးနည်းလမ်းတရားမျှတလို့မဆိုအမှု၌, သင်ဖြုန်းနေကြတယ်အချိန်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မနေသင့်။
8 ။ ကြီးမားသော ဝက်လက်တက်တူး
9 ။ ဝက်လက်တက်တူး
10 ။ ချစ်သူများဝက်လက်တက်တူး
11 ။ မိတ်ဖက် ဝက်လက်တက်တူး
သငျသညျဝက်လက်တက်တူးထိုးသင့်ရဲ့ပါတနာများရပြီးတာနဲ့အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်သင်နှင့်မသင့်အတွက် drawing ခဲ့ဘူးသူအနုပညာရှင်ရန်သင့်အားယူမှသင့်အားမေးကြည့်ရှုလိမ့်မယ်။
12 ။ မီးတောက်လောင်နေ ဝက်လက်တက်တူး
သင့်ရဲ့မီးဝက်လက်တက်တူးထိုးပြီးစီးခဲ့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမြဲ inking ပြီးနောက်ကြောင့်နှင့်အတူထွက်ရပ်တည်ရန်သင်မည်သို့ပြောပြလိမ့်မယ်။ အရောင်နှင့်နေရာချထားထူးခြားသောသည်နှင့်သာကောင်းတစ်ဦးနန်းတော်ကနေဆည်းပူးနိုင်ပါတယ်။
13 ။ က Superman ဝက်လက်တက်တူး
ကိုယ့်ကိုကိုယ်တက် Turn နှင့်သင်တောင်မှအမျိုးသမီးတစ်ဦးဝတ်နှင့်နေဆဲ chic ကိုကြည့်နိုင်တဲ့ဒီဝက်လက်တက်တူးထိုးရသည့်အခါသစ်ကို Superman ဖြစ်လာသည်။ သင်ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုဘယ်လိုထင်သလဲ
14 ။ ဇာတိ ဝက်လက်တက်တူး
15 ။ ဝက်မွန်းဝက်လက်တက်တူး
ထာဝစဉ်, သင်ကဒီတက်တူးထိုးရှေးခယျြကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်! ကအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များနှင့်အတူအေးမြတက်တူးရှိခြင်းမှကြွလာသောအခါ, အားလုံးပြောပါတယ်တဲ့ဒီဇိုင်းအဘို့အသွားပါ။
16 ။ ကြောက်မက်ဘွယ်သောဝက်လက်တက်တူး
17 ။ အထူးကောင်းမွန်သော ဝက်လက်တက်တူး
အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်စူပါဝက်လက်တက်တူးထိုး Get နှင့်သင်ပယ်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခါတိုင်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ပါစေသောလူများ၏တဦးတည်းဖြစ်လာသည်။
18 ။ သဘာဝ ဝက်လက်တက်တူး
အဆိုပါပိုကောင်းဒီဇိုင်း, အအသေးစိတ်, သင်၏ဝက်လက်တက်တူးထိုး၏နေရာချထား။
19 ။ အေးချမ်းသော ဝက်လက်တက်တူး
20 ။ Black နဲ့ White ကဝက်လက်တက်တူး
21 ။ နေချင်စဖွယ်ဝက်လက်တက်တူး
22 ။ ပန်းပွင့်တစ်ဝက်စွပ်အိတ်တက်တူး
23 ။ ကြီးမားသော ဝက်လက်တက်တူး
ထိုနေ့၏အဆုံးမှာ, သင်လူတိုင်း၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်တက်တူးထိုးဤအမျိုးအစားကိုချစ်သွားနေကြသည်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောကိုကြည့်ချင်ပါသလား? သငျသညျဝက်လက်တက်တူးအဘို့အသွားသင့်တယ်
24 ။ အကောင်းဆုံးဝက်လက်တက်တူးဒီဇိုင်း
သင်တို့ရှေ့မှတက်တူးထိုးဤအမျိုးအစားမြင်ပြီလော Ladies နှင့်လူတို့၏ခြွင်းချက်နှင့်အေးမြရှာဖွေနေအတွက်တက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သူဖြစ်ကြ၏။ ဒီဇိုင်းရဲ့အဆုံးမှာသင်ဤကဲ့သို့သောတက်တူးဒီဇိုင်းအဘို့အသှားသောပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံဒီအဘို့အသွား၏ကုန်ကျစရိတ်စျေးပေါသည်နှင့်ရရှိ၌သင်တို့၏အချိန်ကိုယူမထားဘူး။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့သညျကိုပြသသောဒီဇိုင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
လက်တက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးကြောင်တက်တူးတက်တူးထလက်မောင်းတက်တူးစိန်တက်တူးခြေကျင်း Tattoosလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးအသင်္ချေတက်တူးလက်တက်တူးအစ်မတက်တူးနေရောင်တက်တူးပန်းချီတက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးလည်ပင်းတက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosစုံတွဲတက်တူးငှက်တက်တူးကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးရေဘဝဲတက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးKoi ငါးတက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးနောက်ကျောတက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးFeather Tattooမြှားတက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများလတက်တူးနှလုံး Tattoosချစ်စရာတက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးခြေလျင်တက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးဆင်တက်တူးမျက်စိတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးrip တက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးဂီတတက်တူးဟင်္တက်တူးရင်ဘတ်တက်တူး